Uneminyaka engakanani ongayigeza ingane?
Umbuzo: "Ingabe kufanelekile ukwenza umthamo we-prophylactic wengane, uma kungenqunywe udokotela?" Omama abaningi bayabuzwa.
Ukuze uthuthuke ngokomzimba nangokomzwelo, ukuhlunga ukuvimbela kunconywa kubo bonke abantwana. Angenza noma yimuphi umama. Kodwa ngaphambi kokuba uqale, khuluma nodokotela wakho ngezindlela ezingcono kakhulu ozisebenzisayo. I-Massage iyasiza ezinganeni kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila. Iqinisa imisipha, ivuse uhlelo lwe-cardiovascular, inomphumela omuhle emlandweni wengane futhi ithuthukisa ukugaya. Kubonakala ukuthi ngokusebenza okuvamile kokusila ngokuphuza okuncane, izingane zilele kangcono, zingenangqondo kakhulu, zizolile futhi zithandeke. Izandla ezifudumele zomama, izinyathelo zabo ezithambile nezibushelelezi, zinika ingane umuzwa wokulondeka nothando. I-Massage ibuye ivumele omama ukuthi bazizwe bexhumana nomntwana, bamnakekele futhi bathande, futhi baphinde bavuselele imizwelo emihle, ngoba wonke umuntu uyazi imiphumela enenzuzo yengane esimweni sengqondo somama.
Ngizoqala nini ukwenza massage for kids?
Ukuphunga ukukhanya kwe-prophylactic kungenziwa cishe kusukela emavikini okuqala okuphila kwengane. Kunconywa, ngaphandle kokucindezela, ukulimaza ingane ngemuva, imilenze, amapeni. Lokhu kuhlale kunomthelela omuhle ekuthuthukiseni konke kwengane, njengoba ethola ukuqala kokuqala kwezwe ngokuthinta komama, futhi ukufudumala nokuthandwa kwakhe okukusizayo kuzosiza ingane ukuba izwe ivikelekile, imama futhi inothando. Njengoba ucwaningo luye lwaboniswa, ekuqaleni umama uqala ukushaya ingane, ngokushesha ezuza isisindo, ukwandisa igciwane lesandulela ngculaza futhi kunciphise izinga le-hormone yokucindezeleka. Kamuva, emasontweni angu-3-4 okuphila, ungaqala ukusebenzisa amasu azinzima nakakhulu ngokucindezela okukhulu. Zama ukungabi ngaphezulu futhi ubuke ukuthi ingane iphendula kanjani kubo.
Ungakwazi ukufaka massage usizo nge colic emathunjini?
Isizathu se-colic sivame ukuhambisana nezinkinga zokudla nokugaya. Kodwa, noma kunjalo, kwaziwa ukuthi kulula ukushaya ngesisu emntwaneni wengane, kusize ekunciphiseni kakhulu ubuhlungu obubangelwa yi-colic, futhi nokususa ngokuphelele ukubonakaliswa kwabo.
Iyiphi indlela yokukhetha ukusilalisa?
Sebenzisa lawo mathuluzi azovumela izandla zakho ukuba zishaye isikhumba somntwana kangcono, futhi ukunyakaza kufanele kube bushelelezi futhi kube lula, ukuze umntwana angathola ukuzwa okujabulisayo ekusikeleni. Enye yezindlela ezingcono kakhulu amafutha omntwana. Uma ukhetha, qiniseka ukuthi uhlose ukuthi kuhloselwe izinsana nokuthi ngabe uhlolwe yini ukuphendula okweqile. Futhi, qiniseka ukuthi i-agent ayisizivimbele ama-pores, angakha imvelo ye-pathogenic.
Ngaki ukuhlanza ingane yami kangaki?
Kwanele ukwenza massage yokuvimbela kanye ngosuku, kodwa nsuku zonke.
Yisiphi isikhathi sosuku olungcono kakhulu ukwenza ukusikhipha umzimba futhi kufanele kube nini isikhathi eside?
Kungcono ukumisa ingane ngenkathi evuka, lapho engafuni ukulala noma adle, uyathula futhi uzizwa kahle, endaweni ethile 30-40 imizuzu emva kokudla ntambama noma kusihlwa. Lezo zingane ezingakwazi ukuzola isikhathi eside ziyanconywa ukuba zihlaziye kusihlwa emva kokugeza. Kungcono, uma isebenzisa izimali ngenhloso yokuphumula. Lokhu kunomthelela ekuphumuleni okwengeziwe futhi kusiza izingane ukuba zilale ngokushesha. Ukuthi ingane ayikhathele, kunconywa ukwenza massage kungapheli imizuzu 10-15.
Zikhona yini amacala lapho ukusikwa kungakusizwa?
Izingane ezinezifo ezinzima ezingapheli nezifo ziqala ukwenza ukusikhipha umzimba ngemuva kokubonisana nodokotela wezingane. Futhi, qaphela ukusabela kwengane ukusikhipha. Uma eqala ukungenangqondo futhi ekhala, kusho ukuthi kufanele simise ukuthi yiyiphi imbangela. Ngenxa yokuthi, hhayi izandla ezifudumala zamasseur, ukucindezela okukhulu noma ukucindezeleka okukhulu, futhi ngezinye izikhathi nje isimo esimpofu sempilo yengane, kungamenza abe nesimo sengqondo esingalungile enqubo ngokwayo.
Ngimaphi amasu angasetshenziswa nge-massage ephumuzayo?
Nge-massage ephumuzayo, ungasebenzisa amasu afanayo njengama-massage evamile okuvimbela, okungukuthi, ukukhanya okuhambayo, okubushelelezi, okuphazamisayo. Ungaqala ngobuso, uhlasele izingwegwe, amaphiko emphunjini, bese uya emathunjini, amapeni, imilenze. Ushaye umhlane ngemuva bese uqeda ukusikhipha.
Ngesikhathi sokuphunga, kungcono ukumtshela inganekwane noma ukuhlabelela i-lullaby. Zama ukubeka ububele nokuzola ngezwi lakho, lokhu kuzokusiza ingane yakho ngokushesha ukuthi igxile ekulele.
Indlela yokwelapha umkhuhlane noma i-ARI enganeni?
Sizosiza u-Arsen Kogan
Ukuvuselelwa ngemuva kokuhlukana kwezingane
Stomatitis - ukuvuvukala komlomo we-mucosa
Ukuluma kwezinambuzane, imithi, ukwelashwa
Ukwelashwa kwesifo sohudo, isifo samathambo
Izilwane ezizithandayo zezinkanyezi zase-Hollywood
Kusho ukunakekelwa komzimba nsuku zonke
Amakhukhi we-Butter "Amasiko"
Indlela yokwenza ingane ilalele
UDorado wabhaka ngelamula
Ummeli uSergei Zhorin usolwa uNicita Dzhigurda ngokusebenzisa izidakamizwa zezinambuzane nezengqondo
Ukukhetha i-shampoo yokunakekelwa kwezinwele okufanele
Omelet nge ukhilimu omuncu kanye noshizi
Izakhiwo eziwusizo zoju lwe-chestnut
I-vase ngaphakathi: amathiphu wabakhi
Ukwelashwa okuphumelelayo kubantwana
Isobho elimnandi nge-broccoli namazambane